Kasị Mma Jikwaa Forex Akaụntụ | Full March 2021 Guide - Mụta ahia 2
Akaụntụ Forex Ejikwa: Ndị na-ere ahịa kacha mma & Ndị ahịa 2021
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụ ahịa ego mana ị na-echegbu onwe gị banyere oke ọrụ ọ nwere ike ibute - mgbe ahụ, akaụntụ njikwa azụmaahịa nwere ike ịbụ naanị ihe ị na-achọ.
Nnoo, a jisiri ike Forex akaụntụ na-enyere gị aka imikpu onwe gị na-azụ na-ere nke ego ụzọ abụọ, na-enweghị nwere onwe mezuo ndị trades onwe gị.
Nke a bụ ebe onye ahịa maara ihe na-abata. Nke ahụ bụ ịsị, ha ga-achịkwa itinye ego ha ka ị ghara.
Na ibe a, anyị ga-abanye n'ime ihe ndekọ ego Forex jisiri ike na otu ha si arụ ọrụ, yana ịkọwa ihe nyiwe kachasị mma iji mee nke a na 2021.
Gini bu ihe eji ejikwa ego gi?
Ihe ndekọ ederede na-enyere gị aka itinye ego site n'aka onye ahịa azụmaahịa. Onye ahia a agaghị enye gị ohere ịnweta ahịa ọtụtụ ijeri dollar, kamakwa ọ ga-enye gị ahịa. Nke a abụghị naanị ịchekwa gị ọtụtụ ọrụ ụkwụ, ịghara ịkọwa nyocha na atụmatụ - mana ọ ga - echekwa gị oge na nrụgide.
Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido azụmaahịa azụmaahịa, nke a bụ ihe kpatara ị ga - ahọrọ akaụntụ Forex. Mụta ahịa ego nwere ike iwe ọtụtụ afọ iji zuo oke, gịnị na nyocha ọrụ aka niile, ọnụ ọgụgụ na eserese ọnụahịa zuru ezu iji nwee nghọta.
Ihe ndekọ ederede Forex na-eme ka ị banye n'ime ụwa nke azụmaahịa azụmaahịa na-enweghị ike ịme ọtụtụ ma ọlị. Adịghị mkpa ka nchegbu banyere ịtụkwasị trades ma ọ bụ usoro iheomume ahịa - niile i nwere ime bụ na-edebe ndị kacha nta ego uru dị ka kwuru gị ore. Ugbu a ihe niile ị ga - echegbu onwe gị bụ ikpebi onye ahịa ị ga - ahọrọ ime ihe ị gwara gị.
N'ezie, onye ahịa ahụ ga-achọ ịkpụ. A sị ka e kwuwe, ọ bụ ịrụsi ọrụ ike na nkà ha na-enyere gị aka inweta uru ndị ahụ. Onu ogugu ga adi iche site na onye ahia rue onye ahia, ma anyi achoputa na ikwu okwu n'ozuzu, o gha adi n'etiti 10% na 50%.
N'ihe banyere ahia mbu, ma obu n'eziokwu ahia obula - enweghi nkwa. Ọ dịghị ihe dị ize ndụ. Nwere ike ịchọta onye ahịa nwere nkà nke nwere ọtụtụ iri afọ nke ahụmahụ na-ebo ụgwọ ụgwọ ọrụ dị elu. Na nke ahụ kwuru, ịkwụ ụgwọ 40% kama 10% maka onye ahịa nwere obere ahụmahụ agaghị ekwe gị nkwa inweta ọtụtụ uru.
Ebe nrụọrụ weebụ zuru ụwa na-awụfu na nyiwe nke onye na-ere ahịa na-enye akaụntụ Forex forex, yabụ ị ga-achọpụta na ọtụtụ n'ime ha na-ekwe nkwa nnukwu nsonaazụ. Ọ bụ ezie na anyị ghọtara na ọ dị mkpa inwe obi ike na ihe ha 'na-ere' ya mere, ikwu nke bụ eziokwu bụ na enweghị ihe akaebe ọ bụla sitere na nyiwe ndị a iji kwado ya.
Ọ bụghị naanị otú ịzụ ahịa si arụ ọrụ, ọ dịghịkwa onye nwere kristal kristal. Chọọ nkà, aha na nsonaazụ niile. Ma, were nkwa nke ihe ịga nke ọma n'abalị na-eji nnu nnu maka obere akpa gị.
Kedu ka esi ejikwa Akaụntụ Forex rụọ ọrụ?
Investmentkpụrụ ntinye ego dị iche na saịtị dị iche iche. Mana, n'ozuzu ya, usoro iji melite akaụntụ yiri.
Tinye ego ego na onye na-ere ahia
Onye ahia ahụ ga - azụtara gị ma ree maka gị ihe.
Y’oburu na onye ahiaa eriteghi uru gi, ha anaghi ego ego.
Mgbe onye ahịa ahụ na-erite uru maka gị, nke a bụ mgbe a ga-ewere pasent enyere ya aka.
Enwere ụzọ abụọ iji bido na akaụntụ Forex a na-ejikwa. Otu nhọrọ bụ imeghe akaụntụ jikwaa site na ụlọ ọrụ brokerage, nhọrọ ọzọ bụ site na ndị ọzọ.
Ejikwa Akaụntụ Forex Site na Broker Online
N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị na-ere ahịa azụmaahịa na-enye gị ohere ịnweta akaụntụ jikwaa. Nke a ga-elekwasị anya na nkwekọrịta azụmaahịa nnomi. Onyinye ahia ahia bu uzo di oke nma nke na-enye gi ohere ịhọrọ onye ahia nke oru gi masiri gi. Then ga - edezi pọtụfoliyo ha ka ọ dịka.
Yabụ, zụta ma ọ bụ ire ọrịre nke onye ahịa a ga-ejupụta na pọtụfoliyo gị (dabere na itinye ego gị). N'iburu nke a n'uche - when ị nọ na nche maka akaụntụ Forex a na-achịkwa, otu n'ime nhọrọ kachasị nghọta na mgbanwe nwere ike ịbụ azụmaahịa nnomi.
Ihe ntanetị dị ka eToro na-enyere gị aka ileba anya na ọnye ọ bụla nke ndenye ego ọ bụla. Site na nke a, ị ga - enwe ezigbo echiche ụdị ụdị akụ ndị na - etinye ego na - elekwasị anya yana nloghachi kwa ọnwa na ntinye ego, yana ụdị ntinye ego niile.
All ị na-chọrọ ime iji na-amalite bụ na-emeghe otu akaụntụ na ore ahia nke ị na-ahọrọ. Ozugbo ekwuputala akaụntụ gị, ịchọrọ itinye ego, rụọ ọrụ ụlọ, ma kpebie nke ọchụnta ego / ịchọrọ ị toomi. Usoro dum gafere site na nke a gaa n’ihu.
Onye Akaụntụ Jikwaa Ọkachamara
Fọdụ ndị enweghị mmasị i copomi ọrụ nke onye ahịa ọzọ. N'okwu a, enwere ọkachamara na njikwa njikwa akaụntụ mgbe niile. Iji gbadata ụzọ a, ịkwesịrị ịdebanye aha na ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ịntanetị nke na-enye akaụntụ njikwa Forex njikwa. Ikwesiri itinye ego opekata mpe maka itinye ego.
Ebe ụfọdụ nyiwe nyiwe na-enyere gị aka ịhọrọ onye ahịa gị dabere na ebumnuche itinye ego nke onwe gị, n'ọtụtụ oge, onye na-ere ahịa ga-ahọrọ onye na-ere ahia nke ha chere na ọ kacha dabara maka mkpa gị.
Platformsfọdụ nyiwe na-eji AI (Amamịghe echiche) na 'igwe mmụta', nke na-akpaghị aka na-amata ma na-amụta usoro na oke data. N'aka ozo, mmuta igwe bu algorithm. Yabụ karịa azụmaahịa mmadụ, Algo Trading Bot ga-etinye ego gị.
Jikwaa Akaụntụ Forex: Ihe Nlereanya
Site na nke a, ị kwesịrị ịmara nke ọma otu esi arụ ọrụ akaụntụ Forex na-arụ ọrụ, yabụ ugbu a ọ bụ oge iji lee etu uru na ọghọm na-arụkarị n'ime ụdị akaụntụ a.
Ihe atụ ndị anyị jirila n'okpuru gbadoro anya na ọnụ ọgụgụ a na-ekwu maka ya. Ma, ha ka na-anọchite anya etu usoro itinye ego na-aga mgbe ị na-azụ ahịa site na iji akaụntụ Forex a jikwaa na ụwa n'ezie.
Ka anyị kwuo na ị na-etinye $ 20,000 na ọkachamara ọkachamara njikwa akaụntụ Forex
Ugbu a, ikpo okwu ahụ na-ekenye gị onye ahịa nwere ahụmahụ nke na-eji na-azụ ahịa na usoro ahia ya. Commissiongwọ ọrụ gị na uru ọ bụla bụ 15%
Ka ọ na-erule ngwụsị nke ọnwa mbụ, onye ahịa ahụ na-enweta uru nke 20%. Site na ntinye ego $ 20,000 gị, nke a ruru uru nke $ 4,000 ($ 20,000 x 20% = $ 4,000).
Site na nke a, onye ahịa ahụ na-ewe ọrụ 15% kwetara na mbụ, nke ruru $ 600 ($ 4,000 x 15% = $ 600)
Ọgwụgwụ ọnwa gị na nke a ruru $ 3,400. Ka o siri dị, pọtụfoliyo gị ruru $ 23,400 ugbu a.
Ugbu a, ka anyị kwuo na ọnwa nke abụọ anaghị aga nke ọma dị ka otu ọnwa. Ọzọkwa nke a bụ nkwupụta echiche niile.
Ka ọ na-erule ngwụsị nke ọnwa abụọ, ka anyị kwuo na onye ahịa ahụ na-efu 15%.
N'ihi na eziokwu na pọtụfoliyo gị ruru $ 23,400 site na njedebe nke otu ọnwa, nke a pụtara na ị nwere ọnwụ $ 3,510.
N'ihi na onye ahia ahụ furu efu na ọnwa a, ha anaghị enweta ọrụ ọ bụla.
Pọtụfoliyo gị na ọnọdụ a bara uru ugbu a $ 19,890.
Dị ka ọ dị na ihe ọ bụla, enwere mgbago na mgbada, ma ị nwere ike ịhụ nke ọma site na ihe atụ a na ọ nwere ike ịgbanwe site na ọnwa ruo ọnwa. Yabụ na n'otu aka, ọ dị mma n'ihi na enweghị ụgwọ ọrụ ọ bụla nwere ike ịga nke ọma. N'aka nke ọzọ, nke a pụtara na itinye ego gị ga-aba uru.
Ofdị Akaụntụ Akaụntụ ejikwa
Enwere ezigbo aka na akaụntụ Forex nke enyere site na ndị na-ere ahịa na ịntanetị. Agbanyeghị na sistemụ Mam, Pamm na Lamm niile na-ada otu ihe, enwere ezigbo ọdịiche dị n'etiti sistemụ azụmaahịa ndị a.
Tupu ịmepe akaụntụ Forex a na-achịkwa, ọ ga-adị mma ma ị buru ụzọ mee nyocha. Ihe kachasị mkpa ị ga-ahụ bụ ọdịiche dị iche n'etiti usoro azụmahịa ọ bụla, na ijide n'aka na ọ ga-adabara gị onwe gị ..
E kwuwerị, ihe na-arụ ọrụ maka otu onye na-etinye ego, nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka onye ọzọ. N'iburu nke ahụ, anyị ga-enyere gị aka ịkọwa ọdịiche dị n'etiti sistemụ njikwa ego 3 ma kọwaa ntakịrị gbasara nke ọ bụla.
Mam na-anọchi anya 'Multi-Account Manager'. Dị ka aha ahụ na-egosi, akaụntụ Mam na-enyere gị aka ijikwa ọtụtụ akụkọ iji zụọ ahịa na itinye ego, ha niile na-eji otu ikpo okwu.
Echere na akaụntụ Forex a na-adaba adaba maka ndị na-etinye ego nwere ike ịnagide ihe egwu. Ihe kpatara ya bụ, ndị njikwa nwere ike ịhọpụta leverage dị elu karịa na obere akaụntụ.
Nkọwa okwu nke 'Lot Allocation Management Module', ọ bụ nnabata nke Pamm (a tụlere n'okpuru) n'ihi na ọ naghị arụ ọrụ dabere na ogo nke akaụntụ ego ọ bụla.
Oge ọ bụla n’ihe nri ahụ zụtara ọtụtụ ego, ihe ndekọ ndị ahịa niile na-agbasawanye site na ọkwa ọkwa. A na-ewerekarị ha dị ka ndị kwesịrị ekwesị maka ndị na-etinye ego na-azụ ahịa na nnukwu ego.
Na ndapụta ebe onye na-achụ ego nwere nnukwu pọtụfoliyo karịa onye njikwa na-ekwu okwu, nke a nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma. Ebe ọ bụ na mgbe njikwa na onye ahịa ahụ nwere ntinye ego, usoro ahụ bara ezigbo uru.
Iguzo maka 'Ogugu Nhazi nhazi nke pasent', akaụntụ a na-achịkwa nke ọma dị iche na abụọ ndị ọzọ anyị kpọtụrụ aha. Nke a bụ n'ihi na Pamms ị nwere ike ịrara pasent nke isi obodo gị ka i wee nwee ike idetuo azụmaahịa sitere na akaụntụ mbụ.
Dịka onye na-etinye ego n'iji ụdị akaụntụ a jikwaa, ị nwere ike iji ọtụtụ akụkọ iji kenye ọnụọgụ dị iche iche na usoro azụmaahịa ọ bụla, si otú a na-eme ka isi obodo gị dị iche.
Ndị njikwa ego hụrụ usoro a n'anya maka ọtụtụ nhọrọ dịnụ. A na-ahụta ọnọdụ itinye ego na mgbanwe dịka mgbanwe n’ihi na ndị ahịa nwere ike ịtọ ntọala oge azụmaahịa, ọnụego ọrụ, yana oge na-agagharị na-amasị ha.
Ndị na-etinye ego na-achọkwa nhọrọ Pamm n'ihi na enwere nnukwu ndị njikwa ọkachamara dị. Pamm na-enyekwa gị ikike ịchịkwa obere ego gị, n'ihi na ị nwere ike inyocha ahịa gị na-ebi ndụ. Nwekwara ike ịhọpụta ma ọ bụ gbanwee ndị ahịa na ndepụta ndị ị họọrọ nke ndị itinye ego, yana ịtọlite ​​ọkwa ndọda ikike.
Akaụntụ Forex Ejikwa: Ihe Ndị Dị Mma
Mgbe ndị ahịa na-achọ ohere ego ha na-etinyekarị n’ihe egwu dị na ya. Otu n'ime ihe kpatara eji eme ihe ndekọ Forex na-ewu ewu bụ n'ihi na ebumnuche ebumpụta ụwa na itinye ego na-atụle obere, na-enwe nnukwu nloghachi.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe kacha mma banyere itinye ego site na akaụntụ Forex na-achịkwa:
Ka anyị na-emetụ aka, akaụntụ ndị Forex jisiri ike na-agbanwe agbanwe maka ndị na-etinye ego na ya. Ọ gbasaghị ma ahịa ọ na-agwụ ike ma ọ bụ na-adịghị ike. Ihe ndekọ ederede Forex na-achọkarị ụzọ iji nweta uru na njedebe.
Isi ihe mere ọtụtụ ndị ji ekpebi itinye ego na Forex bụ ịmepụta uru. Dị ka ndị dị otú a, site na itinye ego kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ịlaghachi ezigbo ego.
Ka o sina dị, ọ dị mkpa ịmụrụ anya tupu ị tinye ego ọ bụla. Nke a bụ ya mere eji ewere akụkọ banyere azụmaahịa azụmaahịa jikwaa dịka oke ohere ịnweta uru.
Maka obere ihe dịka $ 5k ị nwere ike ị nweta uru ruru 20% kwa ọnwa. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịlaghachi karịa, ịnwere ike itinye ego karịa. Investorsfọdụ ndị na-etinye ego na-akọ banyere ịlaghachi dị ka 65% - 100% nke ego mbụ gị.
Platformslọ ọrụ kachasị ewu ewu na-enye ndị ahịa mgbanwe nsonaazụ, nke pụtara na ị nwere ike gosipụta nsonaazụ nke onye ahịa. Otu ihe dị oke mkpa icheta n'agbanyeghị bụ ijide n'aka na ikpo okwu na-ekwupụta ihe ọ laghachiri.
Etinye ego maka ego ọ bụla
Ọ naghị adịkarị mma ma ị bido ịzụ ahịa azụmaahịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ebe ahụ. A sị ka e kwuwe, ị gaghị achọ itinye ndụ na ahụmịhe na-efu gị nnukwu akụkụ nke ego itinye ego gị n'ahịa na-agbanwe agbanwe.
Otu n'ime ihe kachasị mma gbasara akaụntụ Forex a na-ejikwa n'aka bụ na enweghị ahụmịhe ọ bụla gara aga, ị nwere ike ịzụ ahịa ego. N'otu oge ahụ, ịnwere ike iji ikike na ahụmịhe nke ọkachamara azụmaahịa nwere oke.
Enweghị Oge Tradezụ Ahịa? Nsogbu adịghị
Eziokwu ahụ bụ na ndekọ ego azụmaahịa ejiri jikwaa abụghị naanị ihe na-adọrọ mmasị maka ndị ahịa ọhụụ ọhụụ, kamakwa ndị na-enweghị oge iji jikwaa mbọ azụmaahịa ha.
Forex trading na-achọ oge dị ukwuu na nraranye. Dị ka ndị dị otú a, ịma mma nke akụkọ ndị a na-achịkwa bụ na ị nwere ike ịnọ na nchekwa na ịmara na ọbụlagodi mgbe ị na-arụsi ọrụ ike na ndụ - onye ọkachamara n'ọhịa ahụ na-achịkwa akaụntụ ahịa gị.
Dịka anyị kwurula, enwere ihe egwu dị na azụmaahịa azụmaahịa na DIY. Dingzụ ahịa site na akaụntụ Forex ejiri jikwaa na-enye gị ohere dị iche iche dị iche iche nke ọ bụghị naanị akụ - kama ihe ọmụma na trading azum. N'ụzọ dị oke mkpa, ịkwesighi ịbụ ọkachamara ọkachamara itinye ego.
Ndị na-ere ahịa na ndị ahịa kachasị mma ga-enwe usoro njikwa ihe egwu a ga-agbaso ma nwee ike iji oke ọdịda. N'ikwu okwu n'ozuzu, ị ga-atụ anya ihe ize ndụ karịa 2-3% na ntinye ego gị na otu ahia.
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ego buru ibu karị, mgbe ahụ ihe egwu ndị na-ere ahịa nwere ike ịdị obere. Ihe atụ nke a ga - abụ ma ọ bụrụ na ịmalite iji akaụntụ 20x jikwaa njikwa gị site na iji njedebe nkwụsị XNUMX%. Ọbụna nke a nwere ike ịbụ nke karịrị ya. Site na nke ahụ, jidesie ike na ndị na-eweta akaụntụ azụmaahịa na-eweta 'nchedo echiche'.
E nwere echiche na-ezighị ezi n'etiti ndị na-etinye ego na njikwa akaụntụ azụmaahịa na-emebi nchekwa na nchekwa nke akụkọ ha. Ihe mere ndị mmadụ ji kwenye na nke a bụ na onye njikwa ego na-azụ ahịa na akaụntụ ahụ ga-enwetakwa nkọwa ndị ahụ.
Eziokwu bụ na ị na-achịkwa njikwa akaụntụ gị. A na-ahapụ onye njikwa ego ka o jiri akaụntụ nkeonwe gị iji weghachite ego maka azụmaahịa. Iji mee ka o doo anya, anaghị ekwe ka onye njikwa ego gị wepụ ego na akaụntụ gị.
ngwaọrụ mkpanaka na echiche teknụzụ ego
Have nwere ikike na njikwa iji mechie akaụntụ gị ma wepụ ego gị ma ọ bụrụ na obi adịghị gị ụtọ. Mana, echiche zuru oke yana akaụntụ Forex a jikwaa bụ ịtụle ya ohere itinye ego na ogologo oge.
Yabụ agbanyeghị na ọtụtụ ndị na - enye gị ọrụ na - enyere gị aka iwepụ ego gị ngwa ngwa oge ọ bụla masịrị gị - ọ bụrụ na ị nwere ike, gbalịa ịrapara na ya.
O Siri Ike Ijikwa
A na-ele Forex anya dị ka onye na-enweghị nchebe, n'adịghị ka ọdịnihu na ahịa ahịa nke na-eji usoro ọrụ arụ ọrụ. N'aka nke ọzọ, Forex nwere ahịa a kọwara dị ka nke a na-achịkwa, na-enweghị ọnụahịa ọ bụla.
Ndị na-etinye ego na ụwa niile na-eji akaụntụ azụmaahịa ejiri buru ibu n'ihi oke mmiri mmiri ahịa - karịa ịghara itinye aka ma ọ bụ ree iwu.
Site na akaụntụ Forex ejiri jikwaa, ị nwere ike ịdọrọ itinye ego gị na mgbe ị hụrụ na ọ dị mma. N'adịghị ka itinye ego azụmaahịa ma ọ bụ ịgbazinye ihe onwunwe - ịkwesighi ichere ruo mgbe onyinye kachasị mma batara wee ree mbak ma ọ bụ ihe onwunwe gị iji hụ uru.
Akaụntụ Forex ejiri nke 2021
Ọ bụrụ na okwu a niile banyere akaụntụ Forex na-eme ka ịchọọ ịbanye ngwa ngwa o kwere mee -mgbe ahụ, anyị edepụtala ọkwa anyị kachasị elu nke 2021 n'okpuru.
1. FX Ezi: Onye Middleman
Nke a bụ usoro nke atọ nke na-eme dị ka onye etiti n'etiti onwe gị, ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ịntanetị, na onye ahịa ahụ. Ekwesịrị ikwu na FX Pig na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ ndị ahịa azụmaahịa na-aga nke ọma na nke ọma.
Otu n’ime kpakpando kasịnụ n’elu ikpo okwu ga-abụ FX Titan. Ọ bụrụ na ịnụbeghị aha ahụ, ọ bụ onye ahịa azụmaahịa nke Australia nwere nkwụsị nke naanị 8.8%. Onye ntinye ego a na-ana ọrụ 35% ọrụ, mana yana nnukwu ndekọ egwu, FX Titan ka na-ewu ewu.
N'elu ikpo okwu a, ihe kacha mkpa ị chọrọ itinye ego dabere na onye ahịa ị kpebiri iso ya. O nwere ike ịbụ ihe dị ka $ 500. Site na FX Pig ị nwekwara ike ịnụ ụtọ iwepụ ego na-enweghị latency. Na nkenke, nke a na-enyere gị aka ịdọrọ ego gị ozugbo ọ bụla ịchọrọ.
Ijikọ gị na ndị ahịa echere tupu enwee nnukwu ndekọ egwu.
Min nkwụnye ego dị ka $ 500
Ndị ahịa akaụntụ Pamm pre-vetted
Gaa Leta Ezi Ọkụ
2. FxMAC: Ebumnuche ahia ahia isii
Uzo a na-enye atumatu ahia ahia 6 ma obu onye okacha amara nke na enyere gi aka. FxMAC ga-ekenye gị ọkachamara nke gị kachasị dabara na mkpa gị. N'ezie, ị ga-ebu ụzọ kpebie atụmatụ itinye ego na ntinye ego.
Ihe ikpo okwu a na-agbanwe n'ezie n'ihi na, n'adịghị ka ọtụtụ ndị na-eweta akaụntụ Forex mbụ, ị nwere ike itinye aka na usoro itinye ego.
Otu ihe atụ nke atụmatụ nwere ike ịbụ akụkọ gbadoro ụkwụ - na-elekwasị anya na isi. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike iji usoro nyocha Fibonacci na ọkara na-agagharị agagharị. Kedu ụzọ ọ bụla, itinye ego niile ga-akpaghị aka.
Otú ọ dị, otu ihe ị ga-ahụ bụ na opekata mpe ntinye ego kacha nta bụ $ 5,000. Strategiesfọdụ atụmatụ dị n'elu ikpo okwu a na-akwụ ụgwọ ọrụ 50% nke dị oke elu n'ezie.
Nwere ike ịhọrọ usoro ịzụ ahịa nke onwe gị.
Jikwaa Akaụntụ Forex: Ihe Ize Ndụ
Ebe a na-enweghị nkwa, enwere nsogbu. Yabụ na nke a, site na itinye ego site na akaụntụ azụmaahịa ejiri jikwaa yana ịdabere na onye ahịa nwere ahụmahụ ka ị mee ọnụ gị, nke a apụtaghị na ị ga-ekwe nkwa nnukwu izu, ọnwa ma ọ bụ afọ na ahịa.
Inwe onye ahia nwere ahụmahụ n'azụ gị ka na-etinye gị n'ọnọdụ dị mma iji nweta nsonaazụ kacha mma n'agbanyeghị ọnọdụ. Ihe kachasị mma i nwere ike ime bụ inwe ezi uche n’ihe ọghọm dị na ya, dịka atụmatụ ahịa ọ bụla.
Ndị nkọwa banyere ahịa kwuru na otu ụzọ kacha mma iji belata ihe egwu dị na ya bụ ịgbasa ego gị. Greatzọ dị mma isi mee nke a bụ idetuo ndị ahịa ole na ole na ntanetị eToro.
Dịka ọmụmaatụ, n'ihi na ị nwere ike i copyomi ahia maka $ 200, nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwere ike itinye ego $ 2k ma tinye onwe gị otu nnukwu ndị ahịa 10.
Ọ bụ ezigbo ụzọ ịghara itinye akwa gị niile n’ime otu nkata. Notgaghị enwe mmetụta nke otu nnọkọ ahịa azụmaahịa dịka ị ga-eche naanị otu onye ahịa ahụ iji toomie.
Ikpebi na Akaụntụ Forex jikwaa
Naanị site na ịme nchọta ịntanetị dị mfe, ị ga-ahụ na e nwere oke oke ihe ndekọ ederede Forex ịhọrọ site na.
Ndị a bụ ụfọdụ echiche maka ị ga-ebu n'uche mgbe ị na-achọ maka ikpo okwu akaụntụ Forex zuru oke.
Njikwa Akaụntụ Mandị
Ihe mbụ ị ga - eme bụ iche maka ụdị akaụntụ Forex ịchọrọ ijikwa mepee. Ọ bụrụ na ịnọrọ na njikwa ebe ị na-ewu ọtụtụ ụdị pọtụfoliyo gị bụ ihe ị chọrọ - mgbe ahụ anyị na-akwado ikpo okwu dị ka eToro.
N'akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ usoro akpaghị aka site na mmalite ruo na njedebe - mgbe ahụ FX Mac nwere ike ịbụ ikpo okwu maka gị. Ikwesighi igho ndi ahia gi. Kama, ha na emere gị ya wee lekọta ihe niile site na mgbe ahụ gawa.
Ọ dị mkpa ịnwe ike ịlele na ozi enyere gị ziri ezi mgbe ọ bịara na nloghachi ekwupụtara. Ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa kwuru na ha mere nlọghachi na ọnụọgụ 3 ma ọ bụ 4, ọ pụtaghị na ọ bụ eziokwu.
Ọ bụ n'ihi nke a ka anyị na-akwado ịhọrọ nyiwe nke na-enyere gị aka iji aka gị nyochaa nsonaazụ nke ndị ahịa ị họọrọ nyere.
Anyị na-akwado ịnwale akaụntụ nnabata a na - akwụghị ụgwọ, ma ọ bụ opekata mpe nnwale ka inwee obi uto maka ikpo okwu ahụ. Nke kachasị mkpa, ị ga-ahọrọ mgbe niile otu ikpo okwu nke nwere ikikere ma debe ya. Ọ bụ naanị ya ga-eme ka obi sie gị ike.
Min Investment Chọrọ
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere mgbanwe dị iche iche ma a bịa n'ihe kacha mkpa ị chọrọ itinye ego n'aka ndị na-eweta akaụntụ Forex. Nzuzo dị ka FX Pig ga-enye gị ohere ịmalite site na obere $ 500, ebe Okwu Ahịa ego kacha nta dị elu karịa $ 5,000.
Iji maa atụ, ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite nke pere mpe, anyị na-akwado ịhọrọ onye na-eweta ihe nwere obere ego ga - eme ka itinye ego gị na ego.
Dị Tykwụ Tygwọ
Tinye ụfọdụ echiche n’ime otu ị ga-esi kwụọ ụgwọ maka itinye ego gị tupu eburu gị pụọ mgbe ị na-ahọrọ onye na-eweta maka akaụntụ azụmaahịa gị.
Imirikiti nyiwe akaụntụ Forex na-enyere gị aka iji usoro ịkwụ ụgwọ ndị a na-ejikarị eme ihe dị ka Mastercard na Visa. Nke a pụtara na a ga-ebufe ego gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo.
eToro maara nke ọma maka ịnwe usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche dị maka ndị ọrụ yana ọbụlagodi na-akwado e-wallets dị ka Skrill, Neteller na Paypal. E-wallets na-enyekarị ohere nkwụnye ego na ịdọrọ ngwa ngwa karịa usoro ọdịnala.
Pasent Ekekọrịta Ego
Ewezuga nyiwe dị ka eToro, ị ga-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ mgbe ị na-etinye ego site na akaụntụ Forex njikwa. Onu ego ikike komputa di iche di iche iche. Ego mbata ha nwere ike ịdị n'etiti 10% na ihe dịka 50%.
Ha na-ekwu na ị nwetara ihe ị kwụrụ, yabụ na ị ga-ahụkarị na ndị ahịa nwere ahụmịhe na-ejikwa ọkwa ọrụ dị elu karịa.
Ma ekwela ka egwu nke ọnụego ọrụ na-eduga gị ịhọrọ onye kachasị ọnụ ala. E kwuwerị, ụfọdụ ihe na ndụ bara uru karịa ụgwọ. Ọ bụ ya mere kpakpando ji dị mma na họtel, ndị kachasị mma na-akwụkwa nnukwu ego.
Hapụ T & Cs
Mustkwesịrị ịlele usoro na ọnọdụ dị mkpa nke usoro nyocha ihu igwe na-achịkwa tupu ụdị ntinye ọ bụla.
Ikwesiri ileba anya na nkwusi iwepu ma ghọta ihe a na-atụ anya n'aka gị. Might nwere ike ịhụ na otu onye na-eweta akaụntụ Forex nwere 'oge mgbapụta kacha nta'. Nke a pụtara na ịnweghị ike imetụ ego gị aka ruo mgbe oge ekwesịrị ịgafe.
Gbalịa inye ndị na-enye ha ohere sara mbara. N’ụzọ dị oke mkpa, enwere ike ịbịa oge na ndụ gị mgbe ịchọrọ ego itinye ego gị na mmetụta ozugbo na oge mgbapụta a nwere ike ịmegharị ihe maka gị.
N'ihe niile, ekwesịrị ikwu na akaụntụ Forex forex dị mma maka ọtụtụ ndị na-etinye ego na ya. Nke a bụ ikpe kachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa ahịa azụmaahịa na-arụsi ọrụ ike na-agafe.
Site na ikwe ka onye ahịa azụmaahịa nwere ahụmahụ zụta ma ree n'aha gị, ị na-enwe ike ịnweta nnukwu ụlọ ọrụ ego na-enweghị iji ọtụtụ awa nyocha na ịmụ chaatị.
Ọ bara uru iburu n'uche na naanị n'ihi na onye na-azụ ahịa gị ịhọrọ dị ka ọkachamara, ọ pụtaghị na ị ga-ekwe nkwa nnukwu uru ọ bụla. Mana ọ na - enye gị ohere ka mma iji nwee ihe ịga nke ọma.
Ọ dị oke mkpa na ijide n'aka na ị na-enyocha onye na-eweta akaụntụ azụmaahịa gị ahọpụtara. Nke a gụnyere ijide n'aka na ha nwere ikikere ndị dị mkpa ma ọ bụ ndị otu kwesịrị ekwesị na-achịkwa ya nke ọma.